ရွှေတိဂုံစေတီတော်အနီး မောင်းသူမဲ့ လေယာဉ်ဖြင့် ဓာတ်ပုံရိုက်သူ နှစ်ဦးကို ခေါ်စစ်ဆေး | MM Cities
HomeBlogsMMcities's blogရွှေတိဂုံစေတီတော်အနီး မောင်းသူမဲ့ လေယာဉ်ဖြင့် ဓာတ်ပုံရိုက်သူ နှစ်ဦးကို ခေါ်စစ်ဆေး
Aenean viverra rhoncus pede erat. Etiam feugiat lorem non metus.
Local News Jul 10,2015 450MMcities
ရွှေတိဂုံစေတီတော် အနောက်ဘက်မုခ်အနီးရှိ ပြည်သူ့ရင်ပြင် ပလက်ဖောင်းတွင် ဒီဇင်ဘာလ ၂၇ ရက် နံနက် ၇ နာရီက မောင်းသူမဲ့ ( အဝေးထိန်း) လေယာဉ်ငယ်ဖြင့် ဓာတ်ပုံရိုက်နေသော အမျိုးသားနှစ်ဦးကို စေတီတော် လုံခြုံရေး ကွပ်ကဲရုံး အဖွဲ့မှ ခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့ကြောင်း ရန်ကုန်အနောက်ပိုင်းခရိုင် ရဲတပ်ဖွဲ့ထံမှ သိရှိရ သည်။
မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်ငယ်ဖြင့် ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးသူနှစ်ဦးမှာ “အနာဂတ် ရန်ကုန်မြို့တော်” စာအုပ်ထုတ်ဝေရန် ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီ ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးနှင့် ပြန်ကြားရေးဌာနစုမှ ခွင့်ပြု ချက်ဖြင့် ပြည်သူ့ရင်ပြင်နှင့် ဦးဥတ္တမ ပန်းခြံတို့၏ ရှုခင်းများကို ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးနေစဉ် လေယာဉ်ငယ်မှာ ရွှေတိဂုံစေတီတော် အနောက်ဘက်မုခ်အနီးသို့ ရောက်ရှိခဲ့သောကြောင့် လုံခြုံရေး ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များက ခေါ်စစ်ဆေးခဲ့ကြောင်း ရွှေတိဂုံစေတီတော် ဂေါပက အဖွဲ့ရုံးထံမှ သိရှိရသည်။
“စေတီတော် လုံခြုံရေးအတွက် ဒရုန်း(မောင်းသူမဲ့ လေယာဉ်ငယ်) တွေ လွှတ်မယ်ဆိုရင် ကန့်သတ်နယ်မြေအဖြစ် သတ်မှတ်ထားတယ်၊ အကြောင်းရှိလို့ လွှတ်တင်ချင်ရင် တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ထံက ခွင့်ပြုချက်တောင်းရမှာပါ၊ အခု လေယာဉ်ငယ် လွှတ်တင်ခဲ့သူ နှစ်ယောက်ကို နောက်ထပ်မလုပ်ဖို့ ရှင်းပြပြီး အရေးမယူဘဲ ပြန်လွှတ်လိုက်ပါပြီ” ဟု စေတီတော်လုံခြုံရေး တာဝန်ကျ အမှတ်(၈) လုံခြုံရေး ရဲတပ်ဖွဲ့ခွဲမှ ရဲအရာရှိတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
မောင်းသူမဲ့အဝေးထိန်းလေယာဉ်ငယ်ကို လွှတ်တင်ခဲ့သူနှစ်ဦးမှာ ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီမှ ဝန်ထမ်းများဖြစ်သော အသက် ၇၀ အရွယ်နှင့် အသက် ၂၆ နှစ် အရွယ် အမျိုးသားတို့ဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့ကို အရေးမယူခဲ့သော် လည်း ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးခဲ့သည့် အဝေးထိန်းလေယာဉ်ငယ်ကို ရွှေတိဂုံစေတီတော်ဂေါပကအဖွဲ့ရုံးမှ ယာယီသိမ်းဆည်းထားကြောင်း အမှတ်(၈) လုံခြုံရေး ရဲတပ်ဖွဲ့ခွဲမှ သိရှိရသည်။
နိုဝင်ဘာလ ၃၀ ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းက ရွှေတိဂုံစေတီတော် အနောက်ဘက်မုခ်အနီးတွင် မောင်းသူမဲ့အဝေးထိန်းလေယာဉ်ငယ်ဖြင့် စေတီတော်ကို ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးခဲ့သည့် တရုတ်နိုင်ငံသား အမျိုးသားတစ်ဦးနှင့် မြန်မာနိုင်ငံသား ဓာတ်ပုံဆရာ အမျိုးသားတစ်ဦးတို့ကို လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့က ခေါ်စစ်ဆေးခဲ့ပြီး ၎င်းတို့၏ လေယာဉ်ငယ်များကို ယာယီသိမ်းဆည်းခဲ့ကြောင်း စေတီတော်ဂေါပကအဖွဲ့ရုံးထံမှ သိရှိရသည်။
ရွှေတိဂုံစေတီတော်ကို နေ့စဉ်နိုင်ငံခြားသား ခရီးသည်များအပါအဝင် ဘုရားဖူးဦးရေ သုံးသောင်းကျော်လာရောက် ဖူးမြော်လျက်ရှိရာ လုံခြုံရေးအတွက် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အား ၂၀၀ ခန့်ဖြင့် နေ့ည လှည့်ကင်း၊ ဝပ်ကင်း နှင့် ရပ်ကင်းများ ထားရှိကာ အထူးလုံခြုံရေး တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်ထားပြီး စေတီတော်၏ မုခ်လေးခုတွင် အဝေးထိန်းစနစ်ဖြင့် ဖောက်ခွဲမှုများ မပြုလုပ်နိုင်ရန် Wave Jammer စက်များ တပ်ဆင်ထားကြောင်း စေတီတော်လုံခြုံရေး ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ဒုရဲမှူးကြီး အောင်နိုင်ထွန်းက ပြောကြားသည်။